Mareykanka oo howlgal ka fuliyay Soomaaliya [Fahfaahin]
JOWHAR, Soomaaliya - Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgal ciidamo Soomaali ah iyo kuwa Mareykan ah ay ka fuliyeen tuulooyin hoos-yimaadda mBalcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee Koonfurta dalka Soomaaliya.
Saraakiisha amaanka ee gobolka, gaara ahaan kuwa ku sugan Balcad, oo 30-KM dhanka waqooyi uga beegan Muqdisho ayaa tilmaamay in howlgalada oo ahaa kuwa cusub looga saarey kooxda Al-Shabaab degaano hor-leh.
Tuulooyinka laga wareegay Al-Shabaab ayaa lagu sheegay inay kala yihiin; Buulo Kuunto, Daniga Baalow, Basro, Garasweyne iyo kala, oo ay dhamaantooda gacanta ku haysay Al-Shabaab.
Mas'uuliyiinta gobolka iyo kuwa degmadda Balcad ayaa caddeeyay in ciidamada huwanta ah ay kala kulmeen Al-Shabaab iska caabin intii ay socdeen howlgalada ay ka fuliyeen degaanadda dib loo qabsaday.
“Howlgalka oo ay qayb ka ahaayeen ciidamo Mareykan ah, waxa uu ahaa mid qorsheysan. Waxaana ku qabsanay degaano dhowr ah, kuwaasoo ay Al-Shabaab kasoo qaadi jireen weeraradda,” ayuu yiri sarkaal lagu magacaabo Cabdifitaax Xaaji.
Kooxda Al-Shabaab, ee xiriirka la leh Al-Qaacida wali dhankeeda kama aysan soo saarin wax war ah, oo ku saabsan sheegashadda maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe.
Howlgaladaan ay ka sameeyeen ciidamada huwanta ah ee isugu jira Soomaalida iyo Mareykanka ayaa waxaa uu kusoo beegmayaa maalmo un markii degaanada ku dhow degmada Balcad ay marti-geliyeen weeraro khasaaro dhaliyay.
Soomaliya 10.09.2018. 15:23
Dadka degaanka ayaa u sheegay GO in xubno katirsan Al-Shabaab lagu dilay howlgalka....
Soomaaliya: Kumaandoos la wareegay degaan ku dhaw Kismaayo
Soomaliya 17.01.2018. 23:35
Saldhigyo Al-Shabaab ku lahayd Jubbada Hoose oo 'la burburiyay' [Sawirro]
Soomaliya 08.06.2018. 02:36
Wiil uu dhalay Amiirka Al Shabaab oo howlgal lagu dilay
Soomaliya 12.03.2018. 15:41
Ciidamada Dowladda oo deegaan Muhiim ah kala wareegay Al-Shabaab
Soomaliya 10.03.2018. 10:38
Mareykanka oo fariin hanjabaad ah usoo diray Al-Shabaab
Caalamka 15.07.2018. 10:42
Axmed Madoobe oo Safar kedis ah ku tagey Baar-Sanguuni
Soomaliya 10.06.2018. 19:39